Xasan sheekh oo sheegay in Dhalinyaradii loo qaaday Ereteriya la iibsaday – Banaadir Times
Xasan sheekh oo sheegay in Dhalinyaradii loo qaaday Ereteriya la iibsaday
By banaadir 10th June 2021 28 No comment
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si kulul uga hadlay dhalinyaradii dowladda Soomaaliya tababarka Ciidan ugu qaday dalka Ereteriya, balse la sheegay in laga qeyb geliyay dagaalkii ka dhacay Waqooyiga Itoobiya.
Xasan Sheekh waxaa uu sheegay in Dhalinayradaas markii hore si qiyaano ah loo qoray, hayeeshee dano kale oo siyaasadeed loo adeegsaday, isla markaana la iibsaday.
Waxaa uu sidoo kale Xasan Sheekh sheegay in marar badan ay maqlayaan in Dhalinyaradaas la geliyay dagaalkii ay Itoobiya Waqooyiga dalkaas kula gashay Kooxda TPLF, isla markaana Madaxda dowladda Soomaaliya aysan wax jawaab ah ka siinin Waalidiintooda oo maalin walba walaac muujinaya, taasina ay tahay mid aan la aqbali Karin.
“ Lama aqbali karo in dhallinyaro Soomaaliyeed oo ay dowladdu dirtay aan warkooda la heynin. Mas’uuliyiintii howshaas ka dambeeyay waa in ay waalidiinta iyo ummadda Soomaaliyeed u caddeeyaan masiirka carruurta Soomaaliyeed ayuu yiri” Xasan Sheekh.
Ugu dambeyn Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu baaqay madaxda dowlada inay cadeeyaan, tirade Dhalinyarada la qaaday, halka ay ku dambeeyan iyo waqtiga la soo celinaayo.
Dhalinarada Kumanaanka kun gaaraya ee dowladda Soomaliya tababarka Ciidan ugu dirtay dalka Ereteriya ayaa waalidiintooda waxaa ay sheegeen in aysan ka warheyn mudana la hadlin, iyaga oo ka codsday dowladda Soomaaliya iyo Carruurtooda dib loogu soo celiyo.
Sheekh Shariif” Dalka Soomaaliya waxaa laga badbaadiyay dagaalo sokeeye”
By banaadir 30th May 2021
Madaxweynaha Somaliland oo kamid noqday dadka saaka codeeyay
By banaadir 31st May 2021